izindlu Apartment 1 1/2 icebo, Area malunga 70 ezadalwa, 2 igumbi kunye nekhitshi kunye igumbi yokugcina kahle. Property isendaweni 15 km kwintshona Liden malunga 55 km kwintshona Sundsvall. Ngesakhiwo ibekwe ngendlela östsluttning elibheke iindawo Holmsjön. Esi sakhiwo sele oandvänd iminyaka emininzi yaye akukho mbane, amanzi amdaka. ubukhulu icebo 7 511 ezadalwa.
Akution kunye nokubonisa
Izindlu kunye nomhlaba kuthengiswa kwifandesi 3 Ngamana Bultgatan 14, Sundsvall.
Bonisa ngoLwesithathu 25 April at 12.00, emva kokuba isaziso p 010-5760726 usuku phambi kokuba tour.
Le propati inemimandla akukho mbane, yamanzi kunye nogutyulo. Ukufudumeza kuphela ngu seenkuni. Isakhelo eyenziwe ngomthi, zibheke lwangaphandle panel iinkuni, Ngokomthetho chwetheza njengezinambuzane isithuba of eziphathekayo / ilitye, uphahla igcwele yi sheet. Esi sakhiwo osweleyo olukhulu ukulungiswa kokubili- ngaphandle, itshimini uyawohloka, iifestile ezininzi, uyaphule.
areal 7 511 ezadalwa, ezibandakanya kumphezulu owenziwe ngengca, kunye ihlathi isabelo minor. Ngesakhiwo ibekwe ngendlela östsluttning kwindawo ephakamileyo kunye neembono ezithile Holmsjön.
impahla Isibhengezo – kronofogden.se/3133.html.
Iinkonzo Ukunyanzeliswa Customer
Yintoni Kunyanzelekile kwifandesi?
Izinto kuthengiswa kwifandesi kawonke sele foreclosed kuba umnini amatyala ezingekahlawulwa. Izinto ezithengiswe yi igosa lezomthetho.